Liiska Hubinta: Sida Loo Abuuro Waxyaabaha Loo Dhan Yahay | Martech Zone
Maaddaama suuqleydu ay diiradda saaraan waxyaabaha ka qayb galaya dhagaystayaasha, waxaan inta badan isku aragnaa annaga oo ku habboon oo naqshadaynaya ololeyaal kooxo yar oo dad ah oo la mid ah annaga. In kasta oo suuqleyda ay ku dadaalayaan shakhsi ahaanta iyo kaqeybgalka, ku kala duwanaanta farriimahayada waa la iska indhatiraa marar badan. Iyo, adoo fiirinaya dhaqamada, jinsiga, dookha galmada, iyo naafonimada… fariimaheena loola jeedo Gasho dhab ahaan faquuqo dadka anaga oo kale ah.
Ka wada-qaybgalku waa inuu noqdaa mudnaanta farriin kasta oo suuq-geyn ah. Nasiib darrose, warshaddii warbaahintu weli wey ka maqan tahay sumaddii:
Haweenku waa 51% dadka laakiin kaliya 40% ayaa baahisa.
Dadka dhaqamada kala duwan waa 39% dadka laakiin 22% kaliya ayaa hogaamisa baahinta.
20% dadka Mareykanka ah ee da'doodu tahay 18-34 waxaa loo aqoonsadaa inay yihiin LBGTQ laakiin waxay ka kooban yihiin 9% oo keliya kuwa caadiga ah.
13% dadka Mareykanku waxay leeyihiin naafonimo laakiin kaliya 2% dadka caadiga ah ee caadiga ah ayaa naafo ah.
Iyada oo diiradda la saaro ka-mid-ahaanta, warbaahintu waxay gacan ka geysan kartaa kahortagga fikradaha la iska aaminsan yahay waxayna gacan ka geysan kartaa yareynta eexashada miyir la'aanta
Qeexitaannada Ka Qaybgalka
Sinnaanta - iyadoo ujeedkeedu yahay in kor loo qaado caddaaladda laakiin waxay shaqeyn kartaa oo keliya haddii qof walba uu ka soo bilowdo hal meel oo u baahan caawimaad isku mid ah.
Equity - waxay siineysaa qof walba wixii uu u baahnaa si loogu guuleysto halka sinnaanta loola dhaqmayo qof walba si isku mid ah.
Dhex-dhexaadnimo - dabeecadda isku xidhan ee u kala saarista bulshada sida jinsiyada, dabaqada, iyo jinsiga maadaama ay quseeyaan shaqsi ama koox la siiyay, loona arko inay abuureyso nidaamyo is dul saaran oo isku tiirsan oo midab takoor ama khasaaro ah.
Tokenism - dhaqanka ah sameynta kaliya dadaal astaan ​​u ah ka mid noqoshada dadka liita, gaar ahaan iyada oo la qorayo tiro yar oo dad aan badnayn si loo jabiyo muuqaalka sinnaanta.
Eexda - dabeecadaha ama fikradaha ku-habboon ee wax u dhimaya fahamkeenna, ficilkeenna, iyo go'aannadayada si miyir-qab ah.
Tani infographic ka Youtube waxay bixisaa liis warbixineed oo faahfaahsan oo aad u adeegsan karto koox kasta oo hal abuur leh si loo hubiyo in ka-qaybgalka uu darawal u yahay qorshaynta, fulinta, iyo bartilmaameedka dhagaystayaasha waxyaabaha aad abuureyso. Waa tan hoos-u-dhigista liistada hubinta… oo aan wax ka beddelay si loogu isticmaalo urur kasta wixii ku jira… maahan oo keliya fiidiyowga:
Mawduuc: Mawduucyo noocee ah ayaa laga hadlay oo aragtiyahee ayaa ka mid ah?
Mashruucyadayda maaddooyinka hadda jira, miyaad si firfircoon u raadisay aragtiyo kala duwan, gaar ahaan kuwa ka duwan kuwaaga?
Mawduucaagu ma ka shaqeeyaa inuu wax ka qabto ama ka takhaluso fikradaha ku saabsan kooxaha la hayb-sooco oo ka caawiyo dhagaystayaasha inay dadka kale ku eegaan kakanaanta iyo damqashada?
Mawduucaagu (gaar ahaan wararka, taariikhda, iyo sayniska laxiriira) ma siinayaa cod aragtiyo iyo dhaqammo badan?
Onscreen: Maxay dadku arkaan markay i soo booqdaan?
Ma jiraan waxyaabo kaladuwan oo ku jira maaddadayda? Khabiiro iyo hogaamiyayaal feker ah oo ka kala yimid asal kala duwan dhinacyo badan oo aqoonsi (jinsi, jinsi, isir, karti, iwm.) Miyaa lagu muujiyay maadadayda?
10-dii qaybood ee udambeeyay ee uguhoreeyay, majiraan kaladuwanaansho kudhacda codadka matalaya?
Haddii aan isticmaalo animations ama sawirro, miyay muujinayaan noocyo kala duwan oo midabyo maqaarka ah, timo jilicsan, iyo jinsiyo?
Ma waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya codadka sheegaya waxyaabaha aan ka kooban yahay?
Hawlgelinta: Sideen uga qaybqaataa oo u taageeraa abuurayaasha kale?
Wadashaqeyn iyo mashaariic cusub, miyaan eegaa dhuumo kaladuwan oo musharixiin ah oo heerar kala duwan oo xirfadeed ah, oo isku xirnaanshaha ma tixgeliyaa?
Miyaan fursado u qaataa si aan uga faa'iideysto barxadaheyga si aan kor ugu qaado oo aan u taageero abuurayaasha ka soo jeeda asal ahaan aan la soo sheegin?
Miyaan ku barayaa naftayda aragtiyada la faquuqayo anigoo ku mashquulinaya bulshooyin / nuxur kala duwan?
Sidee ururkaygu ugu shaqeynayaa inuu kobciyo codad kala duwan oo uu awood u siiyo isgaarsiinta / saamaynta jiilka soo socda?
Sidee ururkaygu uga fogaadaa calaamadaha? Miyaynu la shaqeynaa khabiiro iyo xiriiriyeyaal ka soo jeeda asal ahaan aan loo baahnayn fursado ka sii dheereeya waxyaabaha la xiriira kala duwanaanta?
Sidee miisaaniyadaha iyo maalgashiyadu uga tarjumayaan ka go'naanshaha kala duwanaanta iyo ka mid noqoshada?
Dhageystayaasha: Sideen uga fakaraa dhagaystayaasha markay wax samaynayaan?
Yuu yahay dhagaystayaasha loogu talagalay? Miyaan tixgeliyay inaan u dhiso nuxurkeyga si aan u raadsado ugana qayb galo dhagaystayaal aad u kala duwan?
Haddii nuxurkeygu ku jiro maaddo dhaqan ahaan u xaglinaysa kooxo gaar ah, ma waxaan bixinayaa xaalad macneheedu soo dhaweyn karo dhagaystayaasha kala duwan?
Markii aan samaynayo cilmi baarista isticmaalaha, hay'addaydu ma hubisaa in aragtiyo kala duwan la raadsado oo lagu daro?
Abuurayaasha Mawduucyada: Kumaa ku jira kooxdayda?
Ma jiraan kala duwanaansho u dhexeeya kooxaha ka shaqeeya mawduucayga?
Tirada dadka ee kooxdaydu miyay ka tarjumaysaa guud ahaan dadweynaha, maahan oo keliya dhagaystayaasha hadda jira?
Miyaan ku hawlan yahay khubaro iyo hogaamiyayaal fikir ah oo ka soo kala jeeda asallo kala duwan oo leh dhinacyo badan oo aqoonsi ah (jinsi, jinsi ama qowmiyad, karti, iwm.) Anigoo ah la-taliyeyaal mashaariicdayda?
Tags: kala duwanaantatirakoobka tirakoobkasinnaantasinaantaka mid noqoshadaku lug lahaanshotirakoobyada ka qaybgalkainfographicisgoyskaqufulancalaamadineex miyir la’aan ah